Ogaden News Agency (ONA) – Banaanbaxyada lagaga soo horjeedo Ismaaciil Cumar Geele oo sii kordhaya
Banaanbaxyada lagaga soo horjeedo Ismaaciil Cumar Geele oo sii kordhaya
Posted by ONA Admin	/ May 28, 2013
Shir ay wadajir u soo abaabuleen Haya’adaha Xuquuqda Aadanaha ee (International Federation for Human Rights (FIDH) iyo haya’adda Xuquuqul Insaanka Jabuuti (DjiboutiLeague for Human Rights (LDDH) ayay kaga codsadeen in aanay xukuumadda u adeegsanin dadka banaanbaxaya awood xad-dhaaf ah. talaabadan ayay ku tilmaameen mucaaradka inay keenayso in caalamka u soo jeedsado hadda xadgudubka uu M/Weynaha Jabuuti ku hayo mucaaradka ka soo horjeeda.
Mudane Cabdiraxmaan Boreh oo arintaa ka hadlay ayaa yidhi;
” Waa arin wanaagsan in xaaladda Jabuuti ka taagan uu caalamka u soo jeedsado. Waxaanan doonaynaa intaa wax ka badan oo ah in saxaafadda caalamka ay u soo jeedsato iyo in dadweynaha ay u istaagaan xuquuqdooda.”
Ciidamada Booliska ayaa kala eryay iyagoo xoog isticmaalay boqolaal ku soo banaabaxayay Wasaaradda Garsoorka horteeda iyagoo codsanaya in la soo daayo nin ka mid ah mucaaradka Jabuuti oo lagu magacaabo Sheekh Bashiir Cabdiraxiim.
Dadka ayaa ka gadoodsan sida loo xaday codkooda doorashadii ugu dambaysay oo inta badan ay ka soo horjeedsadeen in mar 3xaad la doorto Ismaaciil C. Geele hasa ahaatee codkoodii loo rogay dhanka kale.
Cali Saalax oo ah arday jaamacadda dhigta ayaa saxaafadda u sheegay oo yidhi;
“Kuma aanay ekaanin inay xadaan guushanadii doorashada, waxay hadda xabsiga ku gurayaan dadkii aan u codeynay.”
Xisbiga M/weynaha ayaa sheegtay inuu ku guulaystay 49 kursi Golaha Baarlamaanka oo ka kooban 65.
Jabuuti ayaa aad u qasan ka dib markii uu diiday M/weynaha Jabuuti oo ka dhaxlay 1999kii jagada M/weyninimada abtigii Xassan Guuleed Abtidoon markuu geeriyooday inuu ilaaliyo Dastuurka oo qeexayay inuusan laba jeer ka badan isu soo sharixin jagada.
Wuxuu isku dayay M/Weyne Ismaaciil C. Geele in doorkii 1aad ee madaxtinimadiisa u muuqdo inuu yahay M/weyne Somalinimo ay ku jirto oo diyaar u ah inuu umadda Somaliyeed danaheeda wax ka qabto. Waxaa lagu xasuustaa shirkii Carta ee lagu dhisay dawlidii Cabdiqaasim Salaad. Hasa ahaatee wuxuu ugu dambayntii gacanta u galay yeedhinta Itobiya oo ku qasabtay inuu soo qabqabto dadkii qaxootinimada u soo galay dalkiisa ee ka soo cararay cadaadiska gumaysiga Itobiya. Talaabo aad u fool xun oo ka baxsan dhaqanka Islaamnimada iyo midka Somalinimada ayuuna kula kacay isagoo u gacan galiyay sirdoonka Itobiya dhalinyara badan oo halkaa magangalyo u joogtay.
Halkan ka dhagayso Afhayeenka mucaaradka Jabuuti mudane Axmad rayaale oo ka warbixinaya arimahaa.